प्रधानमन्त्रीमाथि सुरक्षा खतरा ? | जनदिशा
प्रधानमन्त्रीमाथि सुरक्षा खतरा ?
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि शारीरिक हमला हुनसक्ने बताएका छन्। सोमबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा ओली समूहका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुमाथि सम्पूर्ण रुपले प्रहार भएको बताएका हुन् ।
‘सम्पूर्ण रुपले ममाथि प्रहार भएको छ, अत्यन्तै तीव्र रुपमा भएको छ । शारीरिक हमला नै भयो र ज्यान तलमाथि भयो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला,’ उनले भने। उनले आफू नरहे पनि पार्टीको भविष्य अन्धकार जान नदिन कार्यकर्ताहरुलाई अपिलसमेत गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘म रहिन भने पनि केही छैन, पार्टी छ। आन्दोलन छ। देश बनाउने पार्टीको भविष्य अन्धकारमा लैजान दिनुहुँदैन।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम असफल भएपछि रक्षात्मक बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि सुरक्षा खतरा बढेको बताउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। हुन् त राजनीतिमा आफू कमजोर भएका बेला सहानुभूति लिन मूल इस्युलाई विषयान्तर गर्न पनि यस्ता प्रचार गर्ने गरिन्छ। कतिपयले भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई पनि त्यहीरुपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
Previous Previous post: प्रधानमन्त्रीकै नगरमा आदिवासीको उठीबास
Next Next post: फेरी बढ्यो इन्धनको मूल्य